Bit By Bit - Okwu Mmalite - 1.1 An ink ihichapụ
N'oge okpomọkụ nke 2009, mobile phones e ịkụ niile gafee Rwanda. Na mgbakwunye na ọtụtụ nde oku n'etiti ezinụlọ, enyi, na azụmahịa enyi, ihe dị ka 1,000 Rwanda natara oku si Joshua Blumenstock na ibe ya. The nnyocha na-amụ ọgaranya na ndị ogbenye omume a nnyocha e mere nke mmadụ e enweghị usoro sampled si a nchekwa data nke 1.5 nde ndị ahịa si Rwanda kasị ukwuu na ekwentị mkpanaaka na-eweta. Blumenstock na ndị ọrụ ibe jụrụ ndị sonyere ma ọ bụrụ na ha chọrọ iso na-a nnyocha e mere, kọwara ọdịdị nke research ha, ma jụọ ya ọtụtụ ajụjụ ndị ha omume igwe mmadụ, na-elekọta mmadụ, na akụnụba e ji mara.
Ihe niile m kwuru ruo ugbu a na-eme ka a dị mma dị ka a omenala na-elekọta mmadụ na sayensị nnyocha e mere. Ma, gịnị na-agbata ọzọ abụghị omenala, ọ dịghị ihe ọzọ adịghị ma. Ha na-eji nnyocha e mere data ịzụ a igwe mmụta nlereanya ịkọ mmadụ akụ na ụba ha oku data, na mgbe ahụ ha na-eji a nlereanya na-eme atụmatụ akụ niile 1.5 nde ndị ahịa. Ọzọ, ha mere atụmatụ na ebe obibi nke ihe nile 1.5 nde ndị ahịa site na iji ala ọmụma agbakwunyere na-akpọ ndekọ. Ibute abụọ ndị a atụmatụ ọnụ-eme atụmatụ na akụ na ụba na-eme atụmatụ ebe obibi-Blumenstock na ndị ọrụ ibe nwee ike na-akwa-mkpebi atụmatụ nke ala nkesa nke akụ na ụba gafee Rwanda. Karịsịa, ha nwere ike na-eme atụmatụ akụ na ụba ọ bụla nke Rwanda si 2.148 mkpụrụ ndụ, ndị kasị nta administrative unit na mba.
Ọ gaghị ekwe omume iji emere ebere a atụmatụ e mere n'ihi na ọ dịbeghị mgbe emepụta atụmatụ e mere maka ndị dị otú ahụ obere ala ebe Rwanda. Ma, mgbe Blumenstock na ndị ọrụ ibe aggregated ha kwuru na Rwanda si 30 distrikti, ha chọpụtara na ha atụmatụ ndị yiri atụmatụ e mere si omume igwe mmadụ na Health Survey, nke gold ọkọlọtọ nke nnyocha ndị e mere na mba na emepe emepe. Ọ bụ ezie na abụọ ndị a na-eru nso-emepụta yiri atụmatụ e mere na nke a, nke obibia nke Blumenstock na ndị ọrụ ibe bụ banyere 10 ugboro ngwa ngwa na ugboro 50 ọnụ ala karịa karịa omenala omume igwe mmadụ na Health nnyocha ndị e mere. Ndị a n'ụzọ dị ịrịba ama kpu ala na-eri atụmatụ ike ọhụrụ ohere na-eme nnyocha, ndị ọchịchị, na ụlọ ọrụ (Blumenstock, Cadamuro, and On 2015) .
Na mgbakwunye na-emepe emepe a ọhụrụ ụkpụrụ, omumu a bụ ụdị dị ka a Rorschach inkblot ule; ihe ndị ahụ na-adabere na ha bụbu. Ọtụtụ na-elekọta mmadụ ọkà mmụta sayensị na-ahụ a ọhụrụ mmesho ngwá ọrụ na ike ga-eji nwalee nchepụta echiche banyere mmepe. Ọtụtụ data ọkà mmụta sayensị na-ahụ a jụụ ọhụrụ igwe mmụta nsogbu. Ọtụtụ ndị achụmnta ego na-ahụ a dị ike obibia maka akpọchi ọnụ ahịa dijitalụ Chọpụta data na ha a kpọkọtaworo. Ọtụtụ nzuzo akwado na-ahụ a na- atụ egwu ncheta bụ na anyị na-ebi a oge nke uka onyunyo. Ọtụtụ amụma eso ụzọ ahụ n'ụzọ na nkà na ụzụ ọhụrụ pụrụ inye aka ike ka mma n'ụwa. N'ezie, nnyocha a niile bụ ihe ndị ahụ, ọ bụkwa ya mere na ọ bụ a window n'ime-eme n'ọdịnihu nke na-elekọta mmadụ nnyocha.